Soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Qalabka Ilaalinta Caafimaadka ee Shiinaha - Baili Medical
Guriga > Alaabta > Baxnaaninta iyo Jimicsiga > Qalabka Ilaalinta Caafimaadka
Qalabka Ilaalinta Caafimaadka waa aalad difaac, sida magacaba ka muuqata, waa aalad difaac ka ilaalisa jirka ama qeyb ka mid ah jirka dhaawac ama dhaawac labaad. Ilaa iyo inta ay tahay qayb ka mid ah jidhka bini'aadamka, waxaa loo qaabeyn karaa iyada oo loo eegayo qaybaha madaxa, garabka, gacanta, suxulka, curcurka, dhexda, lugaha, jilibka, anqawga iyo qalabka kale ee ilaalinta.
Qalabka ilaalinta caafimaadka iyo daryeelka ciyaaraha. Daryeelka caafimaadku wuxuu diiradda saarayaa habka baxnaaninta, in badan oo ku saabsan baxnaaninta jireed ee xubnaha dhaawacmay ama daalan. Iyadoo ilaalinta ciyaaruhu ay xooga saarayso ka-hortagga, inbadan waxa loola jeedaa nooc ka mid ah tallaabooyinka ilaalinta si looga fogaado dhaawac ka hor ciyaar gaar ah.
Qalabka Ka-hortagga Caafimaadku waa inuu ka ilaaliyo kala-goysyadaada dhaawaca, qalabka ilaalinta ciyaaraha ayaa la gashan karaa si uu kaaga ilaaliyo dhaawaca inta lagu jiro ciyaaraha. Daryeelka caafimaadku waa inuu kaa caawiyo inaad hagaajiso bogsashadaada ka dib markaad dhaawacanto oo aad iska ilaaliso inaad mar kale dhaawacdo.
Suunka Tummy Tuck
Suunka Tummy Tuck, yacni, suunka dhexda ayaa qaabeeya suunka caloosha ee ribboonka marada ee mataanaha ah caloosha, qabowga leh caloosha ka hortagga iyo ficilka taageera caloosha. Ka dib marka la adkeeyo oo la hagaajiyo caloosha, waxay si wax ku ool ah u baabi'in kartaa dufanka xad-dhaafka ah, caatada ah oo soo jiid caloosha, waxay yareysaa bararka iyo xanuunka deegaanka, kor u qaadista baxnaaninta dhalmada ka dib iyo dhaawaca ka dib, iyo taxanaha is-ku dhejinta ayaa hagaajin kara cidhiidhiga, taas oo ah ku habboon in la xidho, neefsan karo, diiran oo raaxo leh. Waxa inta badan loo isticmaalaa dumarka umusha ka dib iyo dadka buuran si ay u ururiyaan caloosha iyo dhexda caatada ah.
Qalab Jiidashada Qoorta Qoorta Taageerada Qoorta Qoorta ee Iswaafajinta Laf-dhabarta
Qalabka Qoorta Qoorta Qoorta Qoorta Qoorta ee Qoorta Qoorta Taageerada Is-waafajinta Laf-dhabarta: Qoorta qoortu waa qalab daaweyn caawimo ah oo loogu talagalay spondylosis ilmo-galeenka, kaas oo kicin kara iyo ilaalinta laf-dhabarka ilmo-galeenka, hoos u dhigista dareemaha, yaraynta fal-celinta naxdinta leh ee kala-goysyada intervertebral, waxayna faa'iido u leedahay dib u noqoshada bararka nudaha, xoojinta saamaynta daaweynta iyo ka hortagga soo noqoshada. Qalabaynta ilmagaleenka ilmo-galeenka ayaa lagu dabaqi karaa noocyo kala duwan oo ah spondylosis ilmo-galeenka, gaar ahaan bukaanada qaba herniation disc herniation, nooca dareemayaasha dareenka iyo nooca xididdada vertebral ee spondylosis ilmo-galeenka ilmo-galeenka oo ah marxalad degdeg ah.
Qalabka Jiidashada Qoorta Makaanka
Qalabka Jeexitaanka Qoorta Makaanka: Qoorta qoortu waa qalab daaweyn ah oo kaabayaal ah oo loogu talagalay spondylosis afka ilmo-galeenka, kaas oo kicin kara iyo ilaalinta laf-dhabarka ilmo-galeenka, yaraynta dareemeyaasha dareemayaasha, yaraynta fal-celinta naxdinta leh ee kala-goysyada intervertebral, waxayna faa'iido u leedahay dib u noqoshada bararka nudaha, xoojinta saameynta daaweynta lagana hortago soo noqoshada. Qalabaynta ilmagaleenka ilmo-galeenka ayaa lagu dabaqi karaa noocyo kala duwan oo ah spondylosis ilmo-galeenka, gaar ahaan bukaanada qaba herniation disc herniation, nooca dareemayaasha dareenka iyo nooca xididdada vertebral ee spondylosis ilmo-galeenka ilmo-galeenka oo ah marxalad degdeg ah.
Gacanka cududda dhididka ee la neefsan karo
cudud dhididka suufka ah oo la neefsan karo: ilaaliyaha curcurku waxa loola jeedaa maro loo isticmaalo in lagu ilaaliyo kala-goysyada curcurka. Bulshada maanta, ilaaliyaha curcurku wuxuu noqday mid ka mid ah qalabka isboortiga lagama maarmaanka u ah ciyaartoyda. Curcurku waa qaybta ugu firfircoon jidhka waana mid ka mid ah kuwa ugu nugul dhaawaca. Ciyaartoyda waxay leeyihiin fursad sare oo ah inuu ku dhaco tendinitis cududda. Si aad uga ilaaliso murgacasho ama u dedejiso soo kabashadeeda, xidhashada xadhigga cudud waa mid ka mid ah siyaabaha waxtarka leh.
Xargaha gacanta dhididka gacanta
Gacan-qabeyaasha dhididka cududda: ilaaliyaha curcurku waxa loola jeedaa maro loo isticmaalo in lagu ilaaliyo kala-goysyada curcurka. Bulshada maanta, ilaaliyaha curcurku wuxuu noqday mid ka mid ah qalabka isboortiga lagama maarmaanka u ah ciyaartoyda. Curcurku waa qaybta ugu firfircoon jidhka waana mid ka mid ah kuwa ugu nugul dhaawaca. Ciyaartoyda waxay leeyihiin fursad sare oo ah inuu ku dhaco tendinitis cududda. Si aad uga ilaaliso murgacasho ama u dedejiso soo kabashadeeda, xidhashada xadhigga cudud waa mid ka mid ah siyaabaha waxtarka leh.
Milfuction Sport Kneepad: Kaabista jilibka waa shay loo isticmaalo ilaalinta jilbaha. Waxay leedahay shaqada ilaalinta dhaqdhaqaaqa, ilaalinta qabowga iyo dayactirka wadajirka ah. U qaybsan jilibka-jilibka, daryeelka caafimaadka. Ku haboon ciyaartoyda, da'da dhexe iyo waayeelka, bukaanka jirrooyinka jilibka.
Waxaan haynaa kuwa ugu cusub Qalabka Ilaalinta Caafimaadka oo laga sameeyay warshadeena Shiinaha oo ah badeecadeena ugu weyn, oo noqon karta jumlo. Baili waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah Qalabka Ilaalinta Caafimaadka soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha caanka ah ee Shiinaha. Waxaa lagugu soo dhawaynayaa inaad iibsato Qalabka Ilaalinta Caafimaadka la habeeyey oo wata liiskayaga qiimaha iyo xigashada. Badeecadahayagu waa shahaado CE waxayna ku jiraan kaydka macaamiisheena si ay wax uga doortaan. Waxaan si dhab ah u rajaynaynaa wada shaqayntiina.